Ahoana ny fampiasana efijery 2 amin'ny windows 10 - Easy Multi Display
Noforonina On Enga anie 25, 2021
Hanazava aminao ity lahatsoratra ity ny fomba fampiasana efijery 2 amin'ny windows 10. raha mbola manana olana amin'ny efijeryo ianao, ny rindrambaiko na momba ny hafa Hafanàm-po an signage aza misalasala ny lohahevitra Mifandraisa aminay, Faly izahay manampy anao.
1. rafitra takiana
Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao ny toetran'ny rafitrao satria hiova izy arakaraka ny isan'ny efijery tianao haseho azy tsara. Ny efijery iray dia tsy mitaky fanahafana mitovy amin'ny efijery enina. Ka raha te hampiasa efijery 2 amin'ny windows 10 ianao dia mila manana an'ity fanamboarana ity:
Azafady, mariho fa ity fanahafana ity dia miasa amin'ny efijery iray ka hatramin'ny telo. raha te hampiseho efijery mihoatra ny telo ianao dia tsy maintsy manavao ny fikirakirainao.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fitakiana rafitra hampiasa Easy Multi Display ianao dia zahao ity lahatsoratra ity: "System Requirements".
2. Safidio ny efijeryo
Raha vantany vao fantatrao raha ampy ny fikirakira anao Fisehoan-javatra mora foana ary ny takelakao roa, avy eo, tsy maintsy misafidy ny safidy roa amin'ny efijery Easy Multi Display ianao. Mba hanaovana izany dia mila misafidy ny safidy "2 mampiseho" fotsiny ianao amin'ny efijery fandraisana an-tanana ilay rindrambaiko.
Amin'ny lafiny iray, afaka misafidy efijery hafa ianao, mila manamarina fotsiny ianao raha toa ka ampy tsara ny fikirakira anao.
Ny isan'ny efijery ao amin'ny Easy Multi Display
3. Safidio ny faritra misy anao
Teo aloha dia misafidy ny isan'ny efijery tianao hampiasaina ianao mba hampisehoana ny mediasanao. Ankehitriny, mila misafidy ireo faritra ianao. Ao amin'ny Easy Multi Display, azonao atao ny mizara ny efijery rehetra ho faritra 1, 2, 3 na 4 hanehoana mediana marobe miaraka. Anjaranao sy ilainao izany, raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny rafitra farany ambany ianao dia tsy hanana olana.
Ny isan'ny faritra ao amin'ny Easy Multi Display
4. Safidio ny mediasanao
Farany, raha te hampiseho medias ianao dia mila misafidy ... medias! Miaraka amin'ny Easy Multi DIsplay ianao dia afaka mampiseho karazana rakitra maro toy ny sary (JPG, PNG, GIF ...), horonan-tsary (MP4, AVI, MOV ...), rakitra PowerPoint ary Google Slides na koa rindrambaiko toa ny Microsoft Words na Mircrosoft Excel ! Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fampisehoana rindrambaiko ianao dia azonao zahana ity lahatsoratra ity "Ahoana ny fomba hanehoana ireo rakitra PowerPoint anao"Na"Ahoana ny fampisehoana ireo fisie excel". Ireo lahatsoratra roa ireo dia misy ifandraisany amin'ny rindrambaiko roa Microsoft fa ity dia miasa amin'ny rindrambaiko rehetra.
Ao amin'ny ohatra etsy ambany dia misafidy ny hizara ny efijery voalohany amin'ny faritra 4 izahay ary misafidy ny hampiseho tranonkala 4 (faritra 1, tranokala 1). Tsy maintsy averinao io fanodinkodinana io ho an'ny efijery rehetrao. Avy eo, ho afaka aseho ianao! Mora ve? Raha tianao ny rindrambaiko, afaka andramo maimaim-poana!